सन् २०१९ मा विविध घटना घटे तर सिंगो मानव जाति र जगतलाई २ घटनाले दर्दको छाप छोडेका छन् । त्यसमध्यको एक सन् २०१९ मा अस्ट्रेलियामा दन्किएको प्रलयकारी आगो र अर्को चीनको हुवान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस ।
अस्ट्रेलियामा सल्किएको आगोको राँकोले हजारौं वन्यन्तु र वनस्पतिको नाश गर्‍यो । कैयौ विरुवा, वनस्पति र जनवारको वंश सखाप भयो । जसले पारिस्थितिक पद्धतिमा ठूलो असर पार्ने नै छ । सन् २०१९ डिसेम्बर महिना चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको तापले विश्व जलिरहेको छ ।
एउटाले प्राकृतिक स्थिरता र शिथिलता कायम राख्ने चुनौती खडा गरिदिएको छ भने अर्कोले मानव जीवनको रक्षावरण गर्ने चुनौती तेर्स्याइदिएको छ । विश्व कोरोनाको कहरसँग पौठेजोरी खेल्दै मानवीय रहरलाई जतन गर्न लागिपरेको छ । सवाल मानवीय मूल्यको स्थायित्वसँग जोडिएको छ ।
विश्व बजार ठप्प छ । गतिशील बनेको विश्वको अर्थतन्त्र एकाएक लगाम लागेको छ । विश्वको अर्थतन्त्र नयाँ परिभाषाको पर्खाइमा रुमल्लिएको प्रतित हुन्छ । विश्व कतै लकडाउन, कतै जनता कर्फ्यू, कतै स्टेहोम नामक लगामबाट बाँधिएको छ । सम्भवत विश्वको एक्कासौं शताब्दीको मानव जाति माथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो यो । विश्व आक्रान्त भएको यस युगको यो नै पहिलो संगीन घटना हो ।
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा अर्बाैको सम्पत्ति र करौडौंंको मानवीय क्षति भएपनि विश्वका सबै देश यही तरिकाले समान रुपले यसरी आक्रान्त भएका थिएनन् । युद्धमा सीमित देश सहभागी बने । सीमित मान्छे लडे तर आज र अहिलेको जस्तो फ्याँफ्याँ विश्व सायदै भएन । मानवीय क्रियाकलापले प्रकृति माथिको ज्यादती र दमनको परिणाम विश्वले भोगिरहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र कति संवेदनशील छ ? यो क्षेत्र हल्का रुपमा लिन हुन्छ कि हुँदैन ? यो क्षेत्रलाइ विहंगम महत्त्वका साथ माथि उठाइनुपर्छ कि पर्दैन ? यी प्रश्नको जवाफ कोरोना विपत्तिले खोज्न पक्कै पनि बाध्य पारिरहेको हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारले सके सरकारीकरण गर्ने नसके स्वास्थ्य क्षेत्र माथिको निजीकरणलाई अब उपरान्त रोक्ने सुन्दर अवसर हुन सक्छ ।
इटालीको जस्तो स्वास्थ्यको उपचारको दृष्टिले विश्वको दोस्रो राम्रो देशलाई समेत आच्छुआच्छु पारिरहेको सन्दर्भ एकातिर छ भने अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राज्यलाई समेत हाहाकार पारेको सन्दर्भ अर्कोतिर छ । परमाणु हतियारदेखि ग्रहमा बस्ती बसाल्ने समेतका आविष्कार कोरोनाका अगाडि फिक्का र हलुका सावित भएका छन् ।
सैनिक शक्ति सञ्चय र हतियारको सम्पन्नताको आधारमा आफूलाई सुरक्षित महसूस गरिरहेका मुलुक कोरोनासामु घुडा टेक्दै असुरक्षित महसूस गर्दै प्रताडित भइरहेका छन् । अत्याधुनिक प्रविधि र विज्ञानबाट निर्माण भएका जैविक र भौतिक हतियारले न भाइरस मार्न सके, न सिध्याउन । युद्ध नभएपनि युद्ध हारेको भान सबैमा हुँदैछ ।
हरेक चुनौतीले अवसरका सुन्दर लालिकिरण समेत बोकेका हुन्छन् भनिन्छ । अब कोरोनाको कहर पछिको जगतमा पनि केही नयाँ अवसरको प्रयोग हुने ठहर छ । उदारीकरण र निजीकरणको सक्कली रुप के हो भन्ने तथ्य मज्जाले उजागर हुन थालेका छन् । नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकमा यसका प्रवाह कस्तो पर्‍यो र बन्यो भन्ने भाव स्पष्ट भएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड । पावर हाउस भनेर चिनिएको निजी क्षेत्रप्रति मानिसको विश्वास गुमेको भान हुन्छ ।
सायद अब विश्वमा विश्व शक्ति को र केका लागि भन्ने परिभाषा समेत बदलिने अट्कलबाजी काटिएका छन् । अत्याधुनिक प्रविधिले सुसुज्जित हतियार हुँदैमा कोही बलियो र हतियार नहुँदैमा कमजोर हुन्छ भन्ने भाष्य बदलिनेवाला छ । समयको क्रमलाई हर्ने हो भने विश्वको कुनै मुलुक सदावहार शक्तिशाली र कमजोर भएको पाइँदैन । हरेक मुलुक, नेतृत्व, विचार र आविष्कारको पनि समय हुन्छ । समयक्रमसँगै कोही अस्तित्वमा आउँछन्, कोही लोप हुन्छन् ।
मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्च बनाउन तम्सनेहरूले अब सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन दबाब दिनुपर्ने भएको छ । पुण्य र प्राप्तिको लागि महाज्ञय गर्नेहरूले अब सामुदायिक अस्पतालका संरचना निर्माणको लागि गरिने प्रयत्नमा नै सर्वप्राप्ति हुने रहेछ भन्ने चेत खुलेको हुनेछ ।
स्वघोषित समाजसेवी, सेवक र सेवाको परिभाषा थप नयाँ शिराबाट हुने नै छ । व्यावसायिक क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र पहिचान हुने नै छ । सामाजिक क्षेत्रमा राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका र दायित्व पुनः एक पटक परिभाषित हुने नै छ । धन, दौलत, भैव र बंगालाहरू नै अन्तिम शक्ति र सबथोक हो भनेर मान्ने पुज्ने सबैलाई पैसाले पनि उपचार दिन नसकेको दर्दनाक तथ्यले चिनाइरहेका छन् कि स्वास्थ्य रह्यो र भयो मात्र सबैथोक प्राप्त हुन्छ । एक थान स्वस्थ शरीरले मात्र सबै इच्छाइएका थोक प्राप्त गर्न सक्छ । जीवनका सफलता र असफलताको हिसाबकिताब जीवन रहेसम्म मात्र हुन्छ ।
एक दिन आफैं मर्ने । खियर । सकिएर । मरेर जाने मान्छेको चोलालाई मार्न बम, बुलेट, बारुद, गोला र लोला सबै बनायौं तर रोग, भाइरस र महामारीबाट बच्ने कुनै बुटी, क्याप्सुल र दबाई बनाउन दिल, दिमाग र मस्तिष्क प्रयोग नगरेकोमा वैज्ञानिकहरू पनि चुकचुकाइरहेका होलान् । आणविक हतियार उत्सर्जनका भट्टीहरूबाट पश्चातापका आँशुहरू बगिरहेका होलान् । सायद एक्काइसौं शताब्दीको यही विन्दुबाट विज्ञानको धार पनि परिवर्तन हुनेछ र विनाशका निम्ति सिर्जना होइन विकासको निम्ति सिर्जना हुनेछ ।
पृथ्वी प्रलय हुने । डायनासोर विलय भए जस्तै मानव जातिको पनि विलय हुने अडकलबाजीहरू चर्किरहका छन् । विज्ञान दिमागको उपज हो । दिमागहरू निरपेक्ष हुँदैनन्, सापेक्ष हुन्छन् । सायद त्यही भएर होला विज्ञानका एउटै विषय र तर्कमा पनि भिन्न–भिन्न दृष्टि पर्न र श्रृष्टि हुन थाल्छन् । यी फरक धारको एउटै उद्देश्य सत्य स्थापित गर्नुमा केन्द्रित हुन्छन् । विज्ञान र प्रकृतिको लडाइँको भुमरीमा मानव जाति परेको अवस्था छ । विश्वव्यापारीकरणको विकिरणबाट तेस्रो विश्वका मुलुक बढी प्रभावित हुने दर्दनाक अवस्था छ ।
हाम्रो जस्तो एउटा स्वास्थ्यकर्मी वडा सचिव भएर काम गर्न खटाइने देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्व र संवेदनशीलतालाई लज्जित त त्यसै बनाएकै छ । यही महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्र रुपान्तरणको नयाँ आयाममा प्रवेश गर्न सुअवसर प्राप्त भएको छ । यसको गरिमा र महत्त्व सर्वाधिक बलियो र कमजोरलाई बोध भएको छ ।
प्राकृतिक गतिविधिमाथि मानवीय गतिविधिले पुर्‍याएको क्षति र असर । भएको असन्तुलन र परस्पर विरोधी कार्यले अन्ततोगत्वा मानव जाति संकटमा हुनुपर्ने कुरामा शंका गर्न नमिल्ने । विज्ञान प्रकृति सापेक्ष हुनुपर्नेलाई थप पुष्ट्याइँ गर्न परेन । विश्वको खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण मानवीय रक्षा प्रणालीमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । उदारीकरण र निजीकरणका हावाले एउटा वर्गलाई मनग्यै अक्सिजन प्राप्त भइरह्यो भने अर्को वर्ष अक्सिजन नपाएर आईसीयूमा भर्ना हुन पुग्यो भन्नेमा धेरैको विमति नहोला । राज्य सबैको लागि र सधैको लागि प्रादुभाव भएको हो भन्ने तथ्यलाई बंग्याउन मिल्दैन ।
विश्व राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र विचारको हिसाबले जति ध्रुवीकृत भएपनि विपद् महामारीको सामना सामूहिक प्रयत्न, सहकार्य र समन्वयमा नगरी नहुने बाध्यताको पगरी थमाइदिएको छ । मुलुकभित्र पनि विचार, चिन्तन, मूल्य र मान्यताका हिसाबले विभक्त वर्गलाई फेरि पनि कोरानाको संक्रमणले एक ठाउँमा उभ्याइदिएको छ । विपद कहिल्यै पनि निर्मूल गर्न सकिँदैन । यो असम्भव छ । यसको असरलाई कम गर्न सबैको एक्यवद्धता र वचनवद्धताको आवश्यता हुन्छ । प्रकृतिको लीलाले सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गर्दछ । परिहाल्यो भने एक बच्ने र अर्को मर्ने हुन सक्दैन । सबैलाई समान रुपले ट्रिट गर्दछ ।
मानव विनाको विश्व हुँदैन । मानवीय मूल्य, मान्यता र विश्वासमा नै विश्व अटेको छ । विश्वलाई यस विषम परिस्थितिबाट मुक्त गर्न हातेमालोबाहेक अर्को अचुक अस्त्र देखिएन । मानवीय जीवन रक्षाको लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं । यही चुनौतीभित्र विश्व रुपान्तरणको एउटा नयाँ फेज प्रारम्भ हुनेछ ।